Ulaka lwamalangabi ngabakokfika nokucwaswa kuleli (Zulu)
ULAKA LWAMALANGABI NGABAKOKUFIKA NOKUCWASWA KULELI
Lobu bulwane nokungaphucuzeki kokuhlasela abokufika kuleli ezinsukwini ezimbalwa ezedlule lapha eMzansi (South Africa) imbewu esihlaza sonke kulelizwekazi lothu. Siswele ngisho nomgodi wokucasha. Lokhu okwenzekayo kubeka isithombe esibi kakhulu lelizwe lethu emazweni omhlaba.
Lokhu kucwaswa nokuhlasela abokufika kuleli kuhlukumeza noma kuphatha kabi wonke umuntu ohlala kulelizwekaki lethu. Kungenzeka kanjani ukuthi lobudlova, nokulimaza, nokubulala kwabokufika kuleli kuvunyelwe kulelizwe lenkululeko lakithi na? Laba hambi bakwamanye amazwe, abazisukelanga emazweni abo nje ngokuthanda, kodwa basuswe ukuhlupheka nodlame nesimo esingesihle neze kwelakubo, yibo lababantu ababesizwela nabasisiza ngenkathi nathi sisenkingeni yokuhlukumezeka ngesikhathi sobandlululo lapha kwelakithi. Namhlanje ngenkathi bedinga usizo kithina sesiyabahlukumeza futhi sifuna ukubakhipha kuleli lakithi.
Eqinisweni nje, kunezinto eziyimbangela yalokhukucwasana phakathi kwethu nezihambi zakuleli. Ngakhoke ayikho indlela yokuguqula osekwenzekile.
Kodwa esimele sikwazi ukuthi imbangela noma umsusa waloluchungechunge lokuhlaselana ludalwe ukwentuleka kwemisebenzi, ukuswela ukudla, impilo engekho esimeni esihle sokuhlala, ukwenyuka kokudla, njll. njll.
Uhulumeni kumele abize umhlangano ophuthumayo ekufuneni isixazululo ngokushesha.
AmaMuslim kanye nezinhlangano zezinhlalakahle kumele bazame ukusiza nanoma iyiphi indlela.
Yonke umuntu ohlala kulelizwe lakithi kumele abambe iqhaza ekuzameni ukusiza kulokhu osekuvelile, sizame ngayoyonke indlela ekunqandeni lobugebengu.
Oku baluleke kakhulu wukuthi osomabhizinisi kumele bayeke ukuhlukumeza abantu bakuleli ngokuthi baqashe abokufika kuleli bese bebaholela imali encane.
Njengoba izwe lisenkingeni, kumele sikhumbule umdali simncenge asivikele kukhokonke okubi, sicele kuMdali asithethelele izono zethu, sinikele kwabaswele. Siqinise ekwenzeni izenzo ezinhle.
SENGATHI U-ALLAH ANGABANOMUSA KUTHINA SONKE